Geeridii Cabdi Muriidi Dheere AJAKIS • CNN Somali
HomeBreaking NewsGeeridii Cabdi Muriidi Dheere AJAKIS
September 28, 2021 cnnsomali Breaking News, Somalia, Wararka Maanta 0
Mogadishu ( CNN SOMALI ) Marxuum Cabdi Muriidi Dheere oo loo aqoon ogaa AJAKIS ayaa waxaa uu ku geeriyoooday caasimada dalka Somaliya ee magaalada Muqdishu.
Warkasoo baxay TV ga Universal ee uu ka ahaa barnaamij soo saare ayaa lagu xaqiijiyay geerida marxuum AJAKIS taas oo si toos ah u baahiyay Maki Xaaji Banaadir oo ay wada ahaayeen shaqa wadaag mihnada ka wada dhaxeyso.
Soomaali badan ayaa hadal heesa Majaajiliiste AJAKIS kuwaa oo Tacsi hawada u soo marinayay Barabulshada ee Soomaalida isticmaasho.
Marxuum AJAKIS oo lagu duugay qabuuraha Iskuul Buliisiyo ayaa waxaa aas kiisa soo buux dhaafiyay reer muqdishu oo aan yarkooda iyo wweyn koodaba kala harin iyada oo halkaasi kawada tacsiyadeeyeen dadkii isugu yimid aaska marxuumka
AJAKIS ayaa caan ku ahaa dhinaca duubista tarjumaada af laanta Hindiga ee loo tarjumo Afka Soomaaliga isaga oo qaabil sanaa inuu matalo qeebta ka qosolsiinta ama shactarada.
Intaa waxii ka dambeysay waxaa uu so jiitay indhaha iyo shaashada afka soomaaliga looga hadlo masraxiyadda.
Marka laga soo tago majaajiliistinimada waxaa uu ahaa fanaan leh xirfada fanka oo dabiici ah isaga oo u sahlaneed inuu kumadaaaliyo dadka kaas oo markiisii hore uu bilaabay dhanka madadaalada sanadkii 1996 kii.
Saalax Macalin Cabdulle – Saalax DHeere – ayaa warbaahinta uga hadlay taariikh yar oo kooban oo ku saabsan marxuumkii dhitay sidaa ayuu igu a yiri AJAKIS.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Abwaan Maki Xaaji Banaadir oo isaga na kasoo qeeb galay aaskiisa iyada oo asxaabtii ay wax isla jili jireen dhammaan ay ka wada hadleen oo aan aaskaasi lagu kala harin.
Iayada oo sanadiihii dambe uu aaad uga qosolsiin jiray barnaamijka masraxa furan oo ka bixi jiray isla tv ga caalamiga ee unnivesal
“Anigoo qoslaya ayaan dhimanayaa” ayuu yiri isaga oo si been ah loo galiyay magaalada
ALle ha unaxariistee Cabdi Muriidi Dheere AJAKIS waxaa uu ahaa majaajiliiste ay dhalinyarada iyo duqoowdaba jeclaayeen isaga oo la soo hana qaaday burburkii Somaliya.